Ra’iisul Wasaare C/weli oo Wafdi Xildhibaano ah u diray gobolka Gedo.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed ayaa u diray gobolka Gedo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanadaas kuwaas oo ka qeyb qaadanaya daminta colaadihii muddooyinkaan danbe ka jiray degmooyin ka tirsan gobolkaasi Gedo.
Xildhibaan Muuse Sheekh Cumar iyo Xildhibaan C/fitaax Nuur Mataan ayaa gaaray gelinkii danbe ee shalay magaalada Doolow waxaana halkaasi kulamo kula qaateen masuuliyiinta maamulka gobolka Gedo iyo kuwa Jubba oo dhawaanahaan degmada ka waday shirar dib u heshiisiin oo lagu dhex-dhexaadinayey dhinacyadii ku dagaalamay magaalada Beled-xaawo.
Muuse Sheekh Cumar oo hoggaaminaya Xildhibaanada gaaray gobolka ayaa u sheegay Warbaahinta Kismaayo24 ujeedka ay deegaanka u gaareen inuu yahay ka qeyb qaadashada daminta colaadaha deegaanka ka jira.
“Shalay waxaan gaarnay magaalada Beled-xaawo ujeedka socdaalkeennu u kuurgelida xaaladaha ka jira gobolka iyo sidii aan doorkeena uga qaadan lahayd daminta colaadihii dhawaanahaan deegaanka kasoo cusboonaaday, waxaan gaari doonaan degmooyin kale oo kamid tahay magaalada Beled-xawo dadka deegaankana waan la kulmi doonaa” ayuu yiri Xildhibaan Muuse.
Dhinaca kale Xubnaha golaha baarlamaanka Soomaaliya ee shalay gaaray magaalada Beled-xaawo waxaa ka diray magaalada Muqdisho Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed kaddib markii dhawaan ay ku eedeeyeen Ra’iisul Wasaaraha inuu qariyey doorkii Xildhibaanada ee ka qeyb qaadashada daminta colaadaha ka jira deegaanka.(xgs-K24).
Barwaaqda taala deegaankaas iyo colaadaha kusoo noq noqda isuma dhigmaan waa bishii 8aad ee 2013 iyo camerada Hctv.